SkAdNetwork? Sandbox Nzuzo? M guzoro na MD5s | Martech Zone
Nkwupụta nke June 2020 nke Apple na IDFA ga-abụ atụmatụ nwepu aha maka ndị na-azụ ahịa site na mbupute nke ọnwa Septemba iOS 14, ọ dịka ọ na-adọtị ihe mkpuchi n'okpuru Ulo oru mgbasa ozi 80, na-eziga ndị na-ere ahịa n'ime ara ara ịchọta ihe kachasị mma. Ọ karịala ọnwa abụọ ugbu a, anyị ka na-akpụchakwa isi anyị.
Na-adịbeghị anya yigharia dị oke mkpa ruo mgbe 2021, anyị dịka ụlọ ọrụ kwesịrị iji oge a rụọ ọrụ nke ọma ịchọta ọkọlọtọ ọla edo ọhụrụ maka ikpokọta data ndị ahịa; otu nke na-ekwu banyere nchegbu nzuzo ma nwee ike ịtụkwasị anya na granular. Ekwenyere m na, n'ofe osisi ahụ, ụkpụrụ ọhụrụ ahụ bụ MD5 email hash.
Gịnị bụ MD5?
Ihe omuma MD5-algorithm bu ihe eji eme ihe otutu na-eweputa ihe nkpuchi 128-bit.
Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ na-eche na nku maka Apple si SkAdNetwork na Google Sandbox Nzuzo, ma ha abụọ nwere ọtụtụ ọghọm. Ha abụọ na-egbochi azụmaahịa mepere emepe dịka ha mechiri emechi emechi na-arụ ọrụ site na nyiwe n'onwe ha. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwe usoro mgbasa ozi ndị a, ndị ọrụ ntanetị a ga-enwe ike ịmekwu ma gbochie ọganihu na ụlọ ọrụ ahụ belụsọ ma etinyere ụkpụrụ ọzọ emeghe.
Gịnị bụ SkAdNetwork?
SKAdNetwork bụ usoro maka ịchekwa ihe ekwenti na-echekwa maka ichebe onwe ya. Ebumnuche ya iji nyere aka tụọ ọnụego ntụgharị nke ngwa ịwụnye mkpọsa (CPI) n'emebighị njirimara ndị ọrụ.
Gịnị bụ SKAdNetwork na gịnị ka ọ na-eme?
Tụkwasị na nke a, sistemụ ndị a na - efula na nnukwu uru-tinye maka ezubere iche - ezigbo data. Ebe ọ bụ na ezigara amamọkwa nke njirimara n'etiti awa 24 ruo 48 mgbe eziokwu ahụ gasịrị, ndị mgbasa ozi agaghị enwe ike ịlele ndị na-azụ ahịa n'oge ha nọ n'ahịa ma ha agaghị enwe ike ijikọ ọrụ ngwa na oge ụfọdụ, nke na-egbochi uru nke data n'onwe ya.
E wezụga nsogbu ndị a niile, anyị ekwesịghị ileghara ihe egwu dị na ịhapụ naanị ụlọ ọrụ abụọ aka ịchịkwa data niile metụtara nzuzo a. Ebumnuche a naanị ga-ezu maka ụlọ ọrụ ịkwụsịtụ tupu ịnakwere azịza ndị Apple na Google chọrọ.
Iji gbochie teknụzụ ndị a-goliaths ịghọ ndị nche ọnụ ụzọ ámá siri ike karị nye ndị na-eri ihe, ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ịre ahịa dijitalụ ga-eguzo n'akụkụ ụzọ mepere emepe maka data njirimara.
N'ihi na MD5s bụ ụdọ hexadecimal gbanwere site na adreesị ozi-e nke gafere site na hashing algorithm, usoro ahụ niile na-eme ka ozi ndị ahịa na-emetụ n'ahụ gbadaa n'okporo ụzọ otu ụzọ nke enweghị ike ijikọ onye ahụ. Iji mezuo nke ahụ, ọ bụ ihe nchọpụta nzuzo nke nwere ike ijikọ data iji mepụta profaịlụ njirimara na-enweghị aha mana ọ ka nwere ike ịlele mgbasa ozi na ọkwa dị egwu.
Ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa n'ozuzu ha na-ejikwa otu adreesị ozi-e ahụ ọtụtụ afọ, MD5s nwere nnukwu maapụ nke omume na ọrụ dijitalụ, yabụ, weebụsaịtị, ngwa, ma ọ bụ ikpo okwu ọ bụla nwere onye ọrụ edebanyere aha ga-erite uru site na data siri ike, mgbasa ozi mmekọrịta, na ego.
Ihe nyocha a nwalere ma nwapụta, MD5s, ọkachasị yana ozi adreesị IP, ga-abụ netwọkụ kachasị dị irè na-aga n'ihu n'ọdịnihu na-enweghị MAIDs. Site na MD5s, ndị mgbasa ozi ga-enwe ike iru ndị nwere ike ịnweta na mpaghara ịntanetị ebe edebanyere ndị ọrụ, yana enwere ike jikọta data ahụ na ha iji wee wuo bara uru, yana enweghị aha, profaịlụ. Ọ bụrụ na nnabata mmadụ emee, uru nke obodo ndị dị n'ịntanetị ga-arị elu nke ukwuu.
Kedu ihe bụ MAID?
Njirimara Mgbasa Ozi Mobile ma ọ bụ NJ Mgbasa Ozi Mobile: njirimara onye ọrụ, nke a na-edegharị, njirimara na-enweghị aha jikọtara ya na ekwentị onye ọrụ ma kwadoro site na sistemụ arụmọrụ ha. MAIDs enyere ndị mmepe na ndị ahịa aka ịmata onye na-eji ngwa ha.
Eziokwu bu, odighi ihe kachasị mma, ọ dịkarịa ala, ọ dịbeghị. Agbanyeghị, MD5 bụ ebe dị nro dị nro karịa ala Google ma ọ bụ Apple. Anyị ekwesịghị idozi maka sistemụ mechiri emechi iji gboo mkpa nzuzo. Ichedo njirimara nke ndị ahịa na ozi dị nro dị mkpa, mana ọ dịkwa mkpa ka anyị nwee ike igbo mkpa ndị ọrụ ma nyere ha ozi dị ha mkpa. Ruo mgbe e mepụtara usoro mmeghe ọhụụ, ka anyị rapara n'ihe anyị maara ga-arụ ọrụ.
Tags: apụlcpiozi hashgoogleGoogle chromehashidfaiOS 14Md5md5 mgbaad mgbasa ozi mkpanakamobile mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziigbe nzuzoSKAd Netwọk